Terror Free Somalia Foundation: Waraysi VOA: RW Farmaajo oo laga maqalay erey Soomaalidu muddo maqal ‘Caddaalad’
Waraysi VOA: RW Farmaajo oo laga maqalay erey Soomaalidu muddo maqal ‘Caddaalad’
Ra’iisal Wasaaraha cusub ee Somalia, Maxamed Cabdullaahi (Farmaajo) ayaa sheegay in kooxaha mucaaradka uu nabad ugu baaqayo
Ra’iisal Wasaaaha Cusub ee DFKMG Somalia, Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa sheegay inuu nabad ugu baaqayo kooxaha dawladda Somalia mucaaradka ku ah, waxana uu sheegay in dawladdu aysan weerar ku ahayn kooxahaasi, laakiin haddii ay nabadda diidaan ay ku khasbanaan doonaan in dawladdu is-difaacdo.
Dhinaca kale, waxa uu dadka waddanka dibeddiisa jooga ugu baaqan in ruux walbaa qeyb ka noqdo waxa ka qabashada arrinta Somali.
Raysalwasaaraha Cusub ee Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqay kooxaha mucaaradka ee kasoo horjeeda dawladda in ay joojiyaan dagaalka isla markaana miiska wada hadalka soo fariistaan.
Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo la hadlaayay warbaahinta VOA-da qaybta Afsoomaaliga ayaa sheegay in Dawladiisa ay kooxaha mucaaradka ee ka dagaalamaaya gobolada Koonfureed u furtay albaabka wada hadalka isla markaana ka faa’ideystaan fursadaas.
Dhegayso Waraysi Warbaahinta VOA la yeelatay Raysalwasaare Maxamed Cabdullaahi
Raysalwasaaraha ayaa xusay in mudo badan dalka Soomaaliya ay ka jirtay dhibaato lana soo gaarey xilligii la joojin lahaa colaada oo lasoo celin lahaa nabada iyo kala danbeynti.
Mr.Farmaajo ayaa sheegay hadii ay kooxaha mucaaradka diidaan baaqaas ay Dawladda markaas xaq u leedahay in ay isdifaacdo siduu sheegay.
Waa markii u horeysay Raysalwasaaraha cusub ee Soomaaliya uu ugu baaqo kooxaha mucaaradka wada hadal nabadeed tan iyo markii la magacaabay,mana jirto wax hadal ah oo kasoo baxay dhinacyada hadalkaan loo jeediyey.